နှင်းဆီ ပုဇွန် | Wutyee Food House
ကြက်သားကင် ဆလတ်သုတ် »
February 15, 2012 by chowutyee နှင်းဆီ ပုဇွန်
၄။ ကြက်ဥအနှစ် – ၃လုံး
၅။ ဟင်းရွက်ဆီ – စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ဇွန်း
၆။ ပျားရည် – စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်းခွဲ
၇။ ရှာလကာရည် – စားပွဲတင်ဇွန်း တ၀က်
၈။ ငရုတ်ကောင်းမှုန့် – လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတ၀က်
၉။ နှမ်းဆီ – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း
၁။ ပုဇွန်ကို အခွံမခွာပဲ ၁၀မိနစ်ခန့် ပေါင်းအိုးဖြင့် ပေါင်းပေးပါ။
၂။ ပေါင်းပြီးပြီးချက်ချင်း ရေခဲရေထဲ ပုဇွန်များကို စိမ်လိုက်လျှင် ပုဇွန် အရောင်တက်လာ လိမ့်မည်။
၃။ ပြီးမှ ပုဇွန်ကို တ၀က်ခြမ်းလိုက်ပြီး ပန်းကန်ပြားထဲ နှင်းဆီပုံဖော် ထည့်လိုက်ပါ။
၄။ ဇောက်ခွက်တစ်ခုထဲ ( mustard၊ ကြက်ဥအနှစ်၊ ဟင်းရွက်ဆီ၊ ပျားရည်၊ ရှာလကာရည်၊ နှမ်းဆီ၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်၊ ဆား ) အားလုံးကို ရောခလောက်ပေးပါ။
၅။ ပြီးလျှင် ပုဇွန်ပေါ်သို့ ခလောက်ထားသော အရည်များကို လောင်းချလိုက်ပါ။
၆။ ပုံအလှဖော်ရန် ပန်းကော်ဖီပွင့် (သို့) broccoli ကို ရေနွေးဖြင့် ၂မိနစ်ခန့် ဖျော်ပေးပါ။ ပြီးလျှင် ဆား၊ သကြား အနည်းငယ် ထည့်နုယ်ပေးပါ။
ရ။ ပန်းကော်ဖီပွင့် (သို့) broccoli ကို ပုဇွန် ပန်းကန်ပြားပေါ်တွင် ပုံဖော်တင်လိုက်ပါ။
on January 29, 2010 at 8:00 am | Reply Fatty
So cool!!! Wanna eat!
on January 29, 2010 at 9:04 am | Reply Hmone Gyi
oh oh so cool look yummy…wow my twin is so clever😉
on January 29, 2010 at 9:36 am | Reply chowutyee
on January 29, 2010 at 4:00 pm | Reply ဖြူသန့်
အရမ်းကို စားချင်စဖွယ်လေး ငရည်လေးက သိပ်တော်တာပဲ။
on January 30, 2010 at 3:32 pm | Reply chowutyee
on April 6, 2010 at 1:31 pm | Reply July
taw lite tar wut yee… really look like Rose..😀
on April 6, 2010 at 1:42 pm | Reply chowutyee
hee Thanks Ma July!!!🙂
on July 13, 2010 at 9:00 am | Reply khin Nilar Htwe
မ၀တ်ရည် အမကို လေးလည်းလေးစားတယ်။ အားလည်းကျမိပါတယ်။
ဒီးဟင်းထဲမှာ ကြက်ဥအနှစ်က အစီမ်းလား။ အကြက်လား။ မရှင်းလို့ပါအမ ။ပြောပြပေးပါနော်အမ ။Thanksalot
on July 14, 2010 at 2:02 pm | Reply chowutyee
ကျေးဇူးပါ ခင်နီလာရေ… ကြက်ဥအနှစ်က အစိမ်းကို ခလောက်ပြီး ထည့်ရမှာပါ… လုပ်စားကြည့်ပါ၊ စားလို့တော်တော်ကောင်းတယ်..🙂
on February 8, 2012 at 12:55 pm | Reply fkthet
ဒါလည်းစိတ်ဝင်စားတယ် လုပ်ကြည့်မယ်နော် ပုံဖော်ရတဲ့အစားအသောက်တွေက ရေအဆ က စကားပြောတယ်လို့ထင်တယ်လေ။ အမ တီဗွီက ဖက်ထုပ်လေးလိုပ်ကြည့်ဘူးတယ်။ ဂျုံက ပေါင်းလိုက်ရင် အဖြူကနေ ညစ်တစ်တစ်ဖြစ်သွားတယ် ဘာကြောင့်ဖြစ်နိုင်မလဲဟင် ဘာပေါင်းပေါင်းပါ တခုခုလိုနေလို့လားလို့ သိရင်ပြောပေးပါလား ညီမလေး
on February 8, 2012 at 2:20 pm | Reply chowutyee
ဟုတ်ကဲ့ အမ။ ၀တ်ရည် ဖက်ထုပ် ပေါင်းတာတော့ အ၀ါရောင်လေး ဖြစ်သွားတယ်။ ညစ်တစ်တစ်တော့ဟုတ်ဖူး။ ဖက်ရွက်နဲ့လည်း ဆိုင်မယ် ထင်တယ်မ။ မဖက်ထုပ် လုပ်စားချင်ရင် ကိုရီးယား ဖက်ထုပ် လုပ်နည်းလေးရှိတယ်။ https://getacookrecipe.wordpress.com/2011/08/07/ကိုရီးယား-ဖက်ထုပ်မန်ထို/
on February 16, 2012 at 8:40 am | Reply Su Hlaing
ဟွားးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးအရမ်းတော်တာဘဲ။ နှင်းဆီပန်းပွင့်နဲ့တကယ်တူတယ်။ လိုက်လုပ်ရင်တောင်ရပါ့မလားမသိဘူး။ အရမ်းတော်တာဘဲ။ညီမကဟင်းချက်ရတာဝါသနာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ချက်မစားဖြစ်ပါဘူး။ ချက်နည်းလေးတွေကိုတော့မှတ်ထားပါတယ်။ အလုပ်အားရင်တော့ချက်စားဖို့ပေါ့။ အခုလိုမျိုး ဟင်းချက်နည်းလေးတွေကိုအချိန်ပေးပြီးတင်ပေးတဲ့အစ်မကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
on February 16, 2012 at 1:49 pm | Reply chowutyee
ညီမ လုပ်လည်း နှင်းဆီပန်းနဲ့ တူမှာပါ ညီမ။ လုပ်ရတာ ထင်သလို မခက်ဘူး။ ပုဇွန်လေးတွေကို အဆင့်ဆင့် ထပ်သွားရုံပဲ။ အားရင် ချက်စားကြည့်နော်… နောက်လည်း လာလည်အုန်းနော်.🙂
on February 20, 2012 at 10:28 am | Reply ခင်ယမုံ
on February 21, 2012 at 9:41 am | Reply chowutyee
on March 13, 2012 at 4:40 am | Reply moe pwint
on March 13, 2012 at 2:08 pm | Reply chowutyee
၀တ်ရည်ကလည်း အားပေးလို့ မိုးပွင့်ကို အထူးကျေးဇူးနော်..🙂